Izibambo ezimbini zeFaucet yeBathroom ende: 4″ itephu yegumbi lokuhlambela elinoyilo oluphindiweyo, elenza kube lula ukulungisa amanzi kunye nobushushu! I-arc spout ephezulu ikunika imvume eyaneleyo phantsi kombhobho.
Faucet yangoku yangoku: Umphezulu we-matte omnyama, kunye ne-fashion classic design, ukuqina kwe-faucet yokuhlambela kuyaqinisekiswa, i-non-corrosion, non-rust, anti-scratch.
Inkonzo eyenzelwe: Iminyaka emi-5 iwaranti elinganiselweyo kunye nenkxaso yabathengi inikezelwa. Ihlawulelwa yimbuyekezo yeentsuku ezingama-90. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Uyilo olulodwa olumnyama lwematte
I-arc faucet ephezulu ukunika indawo eyaneleyo
I-spout egudileyo kunye ne-drip-free